FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA ALIKA AN'NY RA ALAPAHA BLUE BLOOD BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika alika an'ny ra Alapaha Blue Blood Bulldog
Van Furth the Alapaha Blue Blood Bulldog aseho eto rehefa olon-dehibe tamin'ny faha-2 taonany, sary natolotry ny Alapaha Connection Kennels avy amin'ny tsipika Lana Lou Lane tany am-boalohany.
Lisitry ny Alapaha Blue Blood Bulldog Mix Dogs
Ny Alapaha Blue Blood Bulldog dia bulldog efa mandroso sy mihoampampana misy loha malalaka sy sofina mitete voajanahary. Ny molotra malaza dia rakotry ny molotra ambony ambony. Misaraka tsara ny maso malaza. Ny palitaon'i Alapaha dia somary fohy sy somary henjana. Ny loko tiana indrindra dia manga merle, merle brown na merle mena voaravaka fotsy na sôkôla ary fotsy. Aleo ihany koa ny maso vera (manga) na maso marbra (volontsôkôlà sy manga mifangaro amin'ny maso tokana). Ny sofina sy ny rambo dia tsy voahaingo na raikitra mihitsy. Mafy sy matanjaka ny vatana. Tery kely kokoa noho ny tratra ny valahany vozongo tsara. Ny lamosina mahitsy dia lava raha alika ambony amin'ny soroka. Tsy esorina velively ny lalotra ando ary toy ny saka ny tongotra.
Ny Alapaha Blue Blood Bulldog dia mahatoky ary mora fampiofanana. Ity karazana ity dia antsoina hoe toy izany noho ny andiany 'mpanjaka'. Alika mpiambina sy mpiambina tsara izy io. Hiady mandra-pahafatiny izy ireo hiaro ny tompony ary hanao alika mpiara-miasa tena tsara. Tsara miaraka sy miaro ny ankizy. Ireto dia alika mavitrika, atletika ary misaina manana fo be. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miasa ao ambanin'ny tsipika mpitarika tokana ary voafaritra mazava tsara. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahitan'ny fifandraisanareo fahombiazana feno.
Hahavony: 24 santimetatra (61 cm)
Milanja: Lehilahy hatramin'ny 100 kilao (47 kg) Vehivavy manodidina ny 34 kilao (34 kg)
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ny lehilahy dia mety ho mavesatra indroa noho ny vavy kely indrindra.
Miaraka amin'ny dobo bitika kely toy izany dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana toy ny fivadibadiky ny hodi-maso (entropion).
Ny Alapaha Blue Blood Bulldogs dia handeha amin'ny laoniny ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Tena tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Ireto alika mpanao fanatanjahan-tena sy mavitrika ireto dia mitaky fanatanjahan-tena antonony. Mila izy ireo mandeha lava isan'andro ary hankafy romp amin'ny faritra voahidy azo antoka.
Ilaina ny fikarakarana kely. Indraindray borosy sy borosy hanala volo maty ary hokapaina amin'ny fandatsahana. Mandroa indray mandeha isaky ny tapa-bolana. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Alapaha Blue Blood Bulldog dia vokatry ny taranaka telo tamin'ny fandaharam-piterahana taloha nataon'i PaPa Buck Lane avy any Rebecca, Georgia, Etazonia. Ny programa dia nanomboka tamin'ny taona 1800 ary natao hanavotana ny 'alika fambolena' any atsimon'i Georgia izay saika lany tamingana . Ity alika mpiambina tsy dia fahita firy ity dia nidina avy tamin'ny alik'i Buck Lane antsoina hoe Otto. Niresaka momba ny zafikeliny i Lana Lou izay nanana 'Otto' foana momba ilay tany. I Otto iray no nilaina rehetra satria ireo Bulldogs ireo dia afaka nanao asan'ny mpiambina sy asan'ny ala. Rehefa novonoin'ny lamasinina i PaPa Buck tamin'ny 1943, ny Otto azy dia nanaporofo ny fahafoizan-tenany tsy tapaka tamin'ny alàlan'ny fitsidihana tsy tapaka sy ny adidy mpiambina ny fasana. Ny zafikelin'i Buck Lane, i Lana Lou Lane dia nanohy ny fandaharam-piterahana mandra-pahafatiny tamin'ny torimasony tamin'ny 20 Jolay 2001. Tahaka ny Plott Hound, ity karazana muscular ity dia famoronana fianakaviana amerikana iray, ary miankina amin'ny fitaizana raisiny ny fahavelomany. Avy amin'ny tahiry Bulldog anglisy, ny razamben'io alika io dia niasa ho mpiandry omby sy kisoa, fa ny Alapaha Blue Blood Bulldog kosa dia natao ho fiarovana sy fiarahana. Ny Animal Research Foundation (ARF) no fisoratana anarana voalohany nanamarika ny faran'ny 'Alapaha Blue Blood Bulldogs' an-dRamatoa Lana Lou Lane tamin'ny 1986. Ramatoa Lane dia mpiompy voamarina ARF ary mandra-pahafatiny tamin'ny 2001, taorian'ny tamin'izay fotoana izay dia nandray an-tanana ny raharaham-barotra ny reniny be taona, Ramatoa Vivian Lane. Taty aoriana dia nivarotra an-tranon'ilay zanany vavy Ramatoa Vivian Lane.
jack russell miniature pincher mix
ABBA = Fikambanan'ny Bulldog Blue-Blood Alapaha
Sugar, ABBA voasoratra anarana Alapaha Blue Blood Bulldog - an'ny Asylum Angel Bulldogs
Hijery ohatra misimisy momba ny Alapaha Blue Blood Bulldog
Alapaha Blue Blood Bulldog Sary 1
Alapaha Blue Blood Bulldog Sary 2
Alapaha Blue Blood Bulldog Sary 3
Bretagne spaniel Cocker spaniel Mix
fifangaroana greyhound italiana sinoa crested italianina
afangaro amin'ny chihuahua ny bulldog anglisy
pitbull orona manga mifangaro amin'ny lab